I-Shuoke Wiremesh Product Technology Co., Ltd.
Mesh yokuhlobisa yensimbi
I-Square Woven Mesh
I-Decoration wire mesh ye-Met...
I-Stainless Steel Metal Decor...
Imeshi yensimbi elukiwe yokuphakama...
Ukuhlobisa / ukwahlukanisa / kwe...
Ukuhlobisa odongeni lwangaphandle kwegumbi...
Architectural zokuhlobisa metal ukwaluka anezikhala ikhethini anezikhala Kuvunguza
Ukwakha igridi kungenye yezindlela ezithuthukayo ezisheshayo zokusetshenziswa ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo. Inikeza ukukhanga komklamo, ukusebenza kahle kwamandla, ukusimama kwezinto ezibonakalayo kanye nokugcinwa kokunakekelwa okuphansi. Letha isithakazelo esithuthukisiwe kuphrojekthi yakho elandelayo ngokungeza ubuhle nomsebenzi wokwakha insimbi yensimbi enezikhala.
Insimbi yokuhlobisa indandatho yezikhali zempi yeketanga lokuvikela
Indandatho yensimbi ibizwa nge-ring mesh, ikhethini le-ring mesh. Yakhiwa izindandatho eziningi ezincane ezinobukhulu obungu-3.85mm-30mm. I-304 / 316 insimbi engagqwali, insimbi, ithusi kanye nezinto zethusi zifanelekile kuma-chain link mesh. Insimbi engagqwali indandatho inezikhala ithandwa kakhulu emakethe ngamazwe.
Ingilazi yensimbi engagqwali elaminethiwe yokuhlobisa ucingo anezikhala
I-Glass Laminated decoration mesh, ingilazi yehhotela enezikhala ezilamiwe isetshenziswa kabanzi emhlobiseni wangaphakathi nangaphandle we-facade, izindonga zamakhethini, ama-partitions, usilingi, ama-sunshade, ama-balconi, amaphasishi nezitebhisi zeziteshi zezindiza, amahhotela, iminyuziyamu, izindlu ze-opera, izinkundla, qeda izitolo zohlobo oludumile, amathilomu, izigcawu zezitolo, izindawo zokuhlala, amahholo ekhonsathi, izakhiwo zamahhovisi, amahholo emibukiso, izitolo ezinkulu nezinye izakhiwo.
Idayimane elinwetshiwe le-aluminium mesh elisetshenziselwa ukuhlobisa kwezakhiwo
Imeshi yokunwetshwa kwensimbi iwuhlobo lwendawo yensimbi emise okwensimbi eyakhiwe ngokusebenzisa amapuleti ensimbi athambile njengensimbi, ithusi, i-aluminium, ingxubevange ye-aluminium nensimbi engagqwali, enwetshwa ukuze iphindwe kabili kuya kweziyishumi ubude basekuqaleni ngemva kokwelashwa okukhethekile kobuchwepheshe bemishini. Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni kwemishini, ukuhlobisa kwangaphakathi, udonga lwamakhethini ensimbi, ukukhiqizwa kwefenisha neminye imikhakha.
Ipuleti le-aluminium elinezimbobo lokuhlobisa odongeni lwamakhethini
Ipuleti le-aluminium enezimbobo akuwona kuphela umkhiqizo oyinhloko wokuhlobisa udonga lwamakhethini yesimanje, kodwa futhi into entsha yokuhlobisa,
Ipuleti le-aluminium elinezimbobo lingahlangabezana nezici zesitayela sodonga lwangaphandle lwezakhiwo futhi lenze abantu baqabule ngezindlela ezihlukahlukene.
Insimbi engagqwali umhlobiso wezakhiwo wangaphakathi we-crimped wire mesh
I-Architectural braided mesh ibizwa nangokuthi i-decorative crimped braided mesh, eyenziwa kakhulu ngensimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, ithusi nezinye izinto zokwakheka komkhiqizo, kwesinye isikhathi ezifaneleka kakhulu ukusetshenziswa.
Ikhava ye-air conditioning ye-aluminium yangokwezifiso
Ikhava ye-Aluminium air conditioner iyisisetshenziswa sokuvikela sangaphandle se-air conditioner. Imikhiqizo yethu yakhelwe futhi yakhiwe endaweni ngokwemigomo eqinile. Imikhiqizo yethu yenzelwe ikhasimende ngalinye ukuze lihlangabezane nezidingo ezihlukile zekhasimende ngalinye.
Imeshi yensimbi elukiwe yomhlobiso wefacade yekheshi
Iphethini ngayinye eyingqayizivele ye-ShuoKe mesh yensimbi yokuhlobisa ingumsebenzi wobuciko ngokwayo, oklanywe ngejometri ethile, izindawo ezivulekile, ubukhulu, nokuguquguquka. Kwenziwe izingcweti ezinekhono ezivela ezinhlobonhlobo zezinsimbi ezihlala isikhathi eside kakhulu kodwa ezisebenziseka kalula, okuhlanganisa insimbi engagqwali, ithusi, i-aluminium nethusi, izindwangu zensimbi ziyizinto zokwakha ezizinzile.
Ukuhlobisa / ukwahlukanisa / kwekhethini le-Aluminium alloy chain mesh metal
Izici zekhethini le-Metal Mesh:
Ihlala isikhathi eside, ilula futhi ihlala isikhathi eside
I-Flexible - shwabana futhi yandise ohlangothini olulodwa
Ngokwezifiso - yenziwe ngosayizi wakho
I-aluminium yokwandisa uphahla lwensimbi yensimbi enezikhala zokuhlobisa
Singahlinzeka ngeqoqo eliphelele lomhlobiso wangaphakathi wensimbi odongeni lwekhethini / uphahla
Nokuhlobisa kwangaphandle kwezakhiwo ezithuthukile, njengamakhethini, uphahla, izitebhisi,
Amakheshi, izakhiwo zamahhovisi zikanokusho, amahhotela, amahholo amadili amakhulu, amahholo ebhizinisi, njll
Insimbi Engagqwali Yensimbi Yokuhlobisa Ikhethini Wall Wire Mesh
Ukunitha kwe-Weft ne-warp kuhlanganiswe ne-Rigi ethambile, i-wire mesh ingasetshenziswa kabanzi embonini yokuhlobisa ukudala noma yimuphi umphumela abaklami abaphupha ngawo.
I-Cable metal mesh iwuhlobo lwemeshi yensimbi yokuhlobisa.
Izintambo zensimbi zekhebula zakhiwe izintambo zensimbi ezilukiwe nezinsimbi zensimbi.
Ngokuvamile i-warp intambo yensimbi kanti i-weft iyinduku yensimbi.
Igumbi umhlobiso wangaphandle odongeni Laser usike ezibaziweyo isikrini metal
Sisebenza ngokukhethekile kwezixazululo zezohwebo nezokuhlala, zasendlini nezangaphandle.
Sinikeza uhla lwamaphaneli okuhlobisa osayizi ojwayelekile futhi bayakwazi ukwenza ngokwezifiso amasayizi ahlukahlukene amaphaneli okuhlobisa ukuze ahlangabezane nezidingo zakho. Ngemiklamo ehlukene engaphezu kuka-3,000 ongakhetha kuyo, ungaqiniseka ukuthi imiklamo yethu ilungele ikhaya lakho, ibhizinisi noma ingadi; Lawa maphaneli angenziwa ngendlela oyifisayo: ubuciko basengadini, abahlukanisi bamagumbi, imbobo yodonga, uthango oluyimfihlo, usilingi, amaphaneli othango, izinto zokukhanyisa, izicabha, izikrini zensimbi ezigqwalile zemvelo, izinsimbi, izimpawu zebhizinisi/zezentengiselwano, isitolo, ihhotela nezindawo zokucima ukoma.
1234 Okulandelayo > >> Ikhasi 1/4
Hot Tags, Imikhiqizo Eshisayo, Imephu yesayithi